Sidee looga ciiday Xaafada Daaru-Salaam ee magaalada muqdisho (Sawirro) | Gaaloos.com
Home » bilicda » Sidee looga ciiday Xaafada Daaru-Salaam ee magaalada muqdisho (Sawirro)
Sidee looga ciiday Xaafada Daaru-Salaam ee magaalada muqdisho (Sawirro)
Boqolaal dadweyne ah oo u damaashaadaayay munaasabada ciidul adxaa ayaa isugu yimid deegaanka Daarusalaam ee Magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa aroortii hore ee saakay kusoo uruuray barxadda daarusalaam oo loo diyaariyay dukashada salaada ciidul adxaa.
Dadka kasoo qeybgalay salaada waxaa qeyb ka ahaa Haween iyo caruur aad u fara badan oo wajiyadooda laga dheehan karay dareen farxad leh.
Munaasabada ciidul adxaa ayaa ka mid ah maalmaha ay dadka muslimiinta ciidaan iyaga oo u dabaal dagayo gudashada waajibaadka Xajka; weyneynta maalintan ayaa aad loogu muujiyaa in caruurtu ay helaan goobo ay ku cayaaraan kuna muujiyaan damaashaadka maalintan, Fu’aad Axmed Warsame oo ah Madaxa suuqgeynta deegaanka Daarusalaam oo ka warbixinayay sida ay ugu diyaargaroobeen munaasabadan ayaa tilmaamay in sanadkan ay soo kordhiyeen agabka electronic sida gaadiidka, tariinnada iyo gamemka ay caruurtu ku cayaaraan kuwaas oo aan horay looga heli jirin dalka.
Dabaaldagga Ciidda ee Daarusalaam ayaa dadweynaha goobtaasi isugu tagay waxay isugu hambalyeynayeen ciidda iyada oo caruurta goobtaasi ay ka heleen agabka ciyaaraha iyada oo farxadoodu ay ahayd mid si weyn loo dareemayo.
Ciidul adxaa waa astaan u taagan weyneynta umadaha Islaamka ay weyneeyaan acmaasha barakeysan ee xajka oo ah isku imaatinka ugu ballaaran ee dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan caalamka iyada oo ku dhawaad laba milyan oo ruux oo isaga yimid in kabadan 150 dowladood ay sanadkan ka qeyb qaadanayaan xajka, dhanka kale dhammaan wadamadaasi oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaa ka socanaayo dabaal dagga Ciiddul adxaa oo sii socon doona labada maalin ee nagu soo aadan.
Title: Sidee looga ciiday Xaafada Daaru-Salaam ee magaalada muqdisho (Sawirro)